I-Nevis Trust - Enye yamaThuluzi Wokuvikelwa Kwempahla Enamandla kakhulu
I-Nevis Trust ye-Asset Protection kusuka ku-Lawsuits
Ochwepheshe abaningi bokuvikelwa kwempahla bayavuma ukuthi enye yezinto ezinamandla kakhulu zokuvikelwa kwempahla yi-trust international emhlabeni wonke eCaribbean Island of Nevis. I-Nevis itholakala eningizimu-mpumalanga yeFlorida. Unomlando wecala lokuvikela impahla enamandla kakhulu. Akuyona nje inkolelo kodwa isikhathi ngasinye esikubonayo sivivinyelwe ukuthi ivikelwe amafa wekhasimende lethu.
Ngivele ebhizinisini lokuvikela izimpahla kusukela ku-1991. Inkampani yethu yakhiwa ku-1906. Ngifundisa izinkomfa kwamanye amafemu njengabameli bawo kanye nama-CPA kanye nabathengisi, ngikholwa ukuthi sinamakhasimende angaphezu kuka-65,000 ku-database yethu futhi senze izinkulungwane zamatokisi nezinkampani ngokweminyaka.
Yebo, kunezinkolelo zasekhaya. Kodwa uma ufunda icala umthetho kanye nezinkolelo ezikhulayo zomthetho wezomthetho ... uzobona ukuthi amajaji amaningi ahlose imiphumela.
Isizathu sokuthi i-international trust isebenza lapho abanikazi basekhaya bekwenziwa khona ukuthi inkantolo yendawo ithi, "Nginike imali." Umphathiswa, oyiNational Island Law Firm yethu ngaphandle komthetho wenkantolo yendawo ngeke ahambisane ... njengoba izinkantolo zendawo zenza awunayo igunya ku-Nevis.
Izinzuzo ze-Nevis Trust
Nazi ezinye zezinzuzo ze-Nevis ezithemba:
I-1. Umkweletu kufanele athumele i-$ 100,000 USD isibopho nohulumeni kaNevis ngaphambi kokuletha isinyathelo somthetho ngokuthembela emhlabeni jikelele ukuthi umthetho ufundwa kanjani ku-2015. Ku-2018, kube ngcono nakakhulu. Izinkantolo ze-Nevis manje zingasetha isibopho saphezulu nakakhulu kunomkhawulo we-$ 100,00. (Ngezinye izikhathi bangasetha isibopho esiphansi.)
I-2. Ngokungafani namazwe amaningi, ukuthembela kwe-Nevis kungapheli kuze kube phakade.
I-3. I-Nevis ayiboni izahlulelo zangaphandle. (Eqinisweni, kungomunye wamazwe ambalwa anikeza lesi sizuzo.)
I-4. I-Odinensi ikuvumela ukuba uhlanganise amathenda amabili abe yilokho noma ukwehlukanisa okukodwa kokubili.
I-5. Uma umbolekisi efaka isenzo sokudlulisa inkohlakalo kumele enze kanjalo kungakapheli unyaka wezenzo zesenzo - noma isizathu sokuba icala lifakwe kuqala ... njengokonakala kwezimoto. Izinkantolo zaseNevis ngeke zizwe ngisho nendaba. Ngakho-ke, kungumhlomulo wakho ukusetha i-trust ngokushesha ngangokunokwenzeka bese uthola iwashi ukukhawula.
I-6. Esikhathini esingenakwenzeka ukuthi amafayili ababolekisile ngokushesha, kuzodingeka bafake isibopho se-$ 100,000 USD futhi bafakaze icala labo ngaphandle kokungabaza okucacile futhi nobufakazi obucacile nobukholisayo bokuthi i-Settlor yasungula ukuthembela ukuze igcine imali kuleyo mboleko. Lokhu kusho ukuthi uma i-Settlor isungula ukuthembela nganoma yisiphi esinye isizathu, njengokungafani kwamanye amazwe, ukuhlelwa kwefa, njll, kungaba nzima kakhulu kumkweletu. Ngaphezu kwalokho, umklomelo wemalimboleko ulahlekelwa yisibopho se $ 100,000 USD.
I-Asset Protection Trust - Indlela Esebenza ngayo
Manje, ukwethenjwa komthetho kusebentisa "isinyathelo esiya esikhwameni sezicathulo". Kungakhathaliseki ukuthi umbolekisi angakwenza ngokuqondile, umbolekisi angangena ezicathulweni zakhe futhi enze into efanayo. Ngakho-ke, yingakho kubalulekile ukuthi ochwepheshe abanolwazi uhlela ukuthembela kwe-Nevis nokuthi une-trustee enelayisensi njengesiqiniseko sethu se-Nevis Law.
LLC Ngaphakathi kweThe Trust
Manje, uma sisungula i-trust, sifuna ukunikeza amaklayenti ethu ukulawula okukude. Ngakho, i-trust ithemba i-100% ye-Nevis LLC futhi sikubeka umphathi. Manje, iklayenti ingumphathi we-LLC olawula izimpahla ze-LLC futhi uyisayina sokuqala kuwo wonke ama-akhawunti.
I-akhawunti yaseBhange leTrust
I-akhawunti yakho akudingeki ibe se-Nevis kodwa ingaba yisiphi isikhungo sezimali emhlabeni esinikeza indawo ephephile yezezimali.
Manje, lapho "into embi" yenzeka, ungakwazi ukuba ne-trustee yethu eqinile yomthetho iqhamuka njengomphathi we-LLC. Manje, i-trustee yi-firm law yethu eqinisekisiwe futhi ehlanganisiwe. Ngaphezu kwalokho, bahamba ngokuhlola okujulile ngemuva ukuthola ilayisense ye-trustee. Ngokuzibophezela sisho ukuthi izimali zinesiqinisekiso.
Ngakho, ukuphepha kwamaklayenti nokuthula kwengqondo, isikhathi esisodwa esilandelayo umthetho wethu lapho izinkantolo zithatha imali.
Ukuphepha kwe-Asset Protection Trust Trust
Ngakho-ke, umbuzo obuzwayo, "Ungabe unganjani, i-100% ithuba lezinkantolo ezithatha imali yakho? Noma ungabe unomthetho oqinisekisiwe wezomthetho, oqokelwe umthetho, ongakaze uthathe imali yomthengi, yenza lokho okukhokhelwe ukuba bakwenze ... .ukuvikela imali yakho? "
Uma "into embi" isusa uchungechunge lokulawula - ukuphathwa kwe-LLC ngaphakathi kwe-trust - kubuya kuwe futhi ubuyele esihlalweni somshayeli nayo yonke imali yakho.
Okwamanje, ngesikhathi sokucindezeleka ngokomthetho, uma unemithetho ekhokhwayo, umphathiswa angakukhokhela. Ungakwazi ukukhokha umngane wakho omethembayo noma isihlobo esikuthembisayo esinikeza imali, njll. Ngakho usenakho ukufinyelela kwimali yakho ... kodwa isithandwa sakho asikho.
Okubalulekile ukuthi konke okusebenze kanzima ngakho kuphephile futhi kuphephile. Ukuvikeleka kwefa elihle le-trust elihlinzekayo kungenxa yezimpahla zamanzi ezigcinwe e-offshore. Izinkantolo zase-US zinamandla phezu kwama-akhawunti asebhange ase-US kanye nezakhiwo.
Ukuvikelwa Kwezimpahla Zokuthengisa
Ngakho, ngenxa yendawo yokuhlala, senza lokho okubizwa ngokuthi ukuhlwithwa kwamanani. Sirekhoda imali ekhokhelwa imali ngokumelene nempahla ekhokhelwa i-LLC. Uma-ke, uma kudingeka, sineqembu lesithathu ukuthenga lezo zindleko futhi senze leyo mali ibe yi-akhawunti engenakutholakala ukwethenjwa kwe-offshore.
Sabeka amathemba amaningi kulezi zimfanelo. Khona-ke abammeli bakhokha phakathi kwe- $ 30,000 kuya ku-$ 50,000. Thintana nathi ngokuqondile futhi singasetha ukuthembela kwengxenyana yale mali. Sicela ushayele kwenye yezinombolo ezingenhla noma ugcwalise ifomu lethu lokubonisana mahhala kuleli khasi.